ရွှေညာသား: October 2019
စာရေးသူ ရွှေညာသား at Monday, October 28, 20190comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဩဂုတ်လထဲတုန်းက ကျောင်းမှာကျင်းပတဲ့ အာဆီယံ ဈေးရောင်းပွဲတော်မှာ အညာသားတို့မြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့က တို့ဟူးသုပ်လုပ်ရောင်းကြတယ်ဗျ။မြန်မာအစားအစာဆိုတော့အားလုံးနီးပါးကသူတို့ဆီမှာလည်းခပ်ဆင်ဆင်တွေမို့သူ့ဟာကို ကိုယ့်အစားအစာသွားလုပ်လို့မရတော့ အညာသားအကြံပေးလိုက်တာ
သူတို့ဆီမှာတို့ဟူးသုပ်မတွေ့မိသေးဘူး ငါတို့ တို့ဟူးသုပ်လုပ်ရောင်းကြမယ်ဆိုပြီးတိုင်ပင်တော့တို့ဟူးကို
ဆိုင်ပေါ်မှာပြဖို့ တို့ဟူးသုပ်ပုံကိုပရင့်ထုတ် ပါဝင်ပစ္စည်းကို အင်္ဂလိပ်လိုရေး ထိုင်းလိုပါဂူဂယ်ကရှာပြီး Lab ထဲကကလေးတွေကိုသေချာအောင်စစ်ခိုင်းပြီးကဒ်ထူစက္ကူမှာကပ် ဆိုင်ရှေ့လာရပ်တာနဲ့ပုံပြ ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းကိုပါ ဖတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကစဝယ်ရင်းဝယ်ရင်းအရသာတွေ့သွားတော့သုံးပွဲလေးပွဲနဲ့လက်မလည်အောင်ကို အားပေးလိုက်ကြတာ မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ အင်ဒိုနီရှား သုံးနိုင်ငံ ရောင်းတဲ့အထဲ ကိုယ်တွေအဖွဲ့ကအစောဆုံးကုန်တာ ကျောင်းကလူကြီးတွေလာတော့ပြစရာတောင်မကျန်တဲ့အထိ။ တို့ဟူးလေးပိဿာလောက်ကို
ဝယ်သူမရှိရင်ကုန်ပါ့ကုန်မလားနဲ့ကျိုရင်းစိတ်ပူ သုပ်တော့လည်းစိတ်ပူ အရသာကိုတော့ကိုယ့်လက်ရာကိုယ်ယုံထားလို့စိတ်ချပေမဲ့ သူတို့မစားဖူးတဲ့အစားအစာမို့ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ပေါ့ဗျာ။နောက်ဆုံးတော့ထင်မှတ်မထားဘဲအစောဆုံးကုန်သွားလိုက်တာနိုင်ငံတကာကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကလည်းလူကြီးတွေလာသည်အထိဆိုင်နေရာမှာပစ္စည်းတွေထားပြီးလူတွေပဲထိုင်နေပါတဲ့။
မန်ကျည်းမှည့်အနှစ်ကိုကျို ဆီချက် ငံပြာရည်ကောင်းကောင်းနဲ့မို့ စားလို့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်
ဂေါ်ဖီထုပ်နဲ့ နံနံပင်ရောပြီးသုပ်ထားတာ ငရုတ်သီးမှုန့်ကို သီးသန့်ချထားပေးလိုက်တယ် အစပ်ကြိုက်ရင် ငရုတ်သီးထည့်စားနော်ဆိုတော့ ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးထည့်စားကြတာ
ဖိလစ်ပိုင်မှာတုန်းကလည်း အာဆီယံဈေးရောင်းပွဲ မြန်မာတွေစုပြီး အညာသားကိုယ်တိုင် ကြာဇံဟင်းခါးချက် ရောင်းတာ ရောင်းလို့ကောင်းတာဆိုတာ တချို့ကနှစ်ခါထပ်လာဝယ်စားကြတယ်။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရှိထားတော့ ရောင်းကောင်းမှာပဲလို့တွေးပြီး တို့ဟူးသုပ်ရောင်းဖို့အကြံပေးတာ။ အရင်နှစ်တွေကရောင်းတာတခါမှ ရောင်းလို့မကုန်ဘူးတဲ့ ကိုယ့်လက်ရာကို ဝိုင်းပြီးချီးကျူးကြတော့ စားဖိုမှုးတို့မျက်နှာ ပင်ပမ်းသမျှအမောကို ပြေလို့ပေါ့။အမေ့ကိုပြန်ပြောပြတော့အမေကလည်းဝမ်းတွေသာလို့။အမေ့တူလို့နေမယ်လို့ဈေးရောင်းရင် ရောင်းလို့ကောင်းတာ ဆိုတော့သဘောကျနေတယ်။
တို့ဟူဆိုတာ မြင်ဖူးအောင် မသုပ်ခင် ခုလို ပြထားလိုက်တယ်
တစ်ပွဲကို ဘတ် ၂၀ နဲ့ ရောင်းတာ
ပဲမှုန့်ကတော့ မြန်မာဆိုင်က မွှေး တံဆိပ် ကုလားပဲအစိမ်းမှုန့်ထုပ်ကိုသုံးပါတယ်။ပဲမှုန့်တစ်ဆရေနှစ်ဆနဲ့ဆို ကွက်တိပါပဲ။ကျိုလို့ကောင်းပြီးကုလားပဲမှုန့်စစ်လို့စားရတာ အရသာလည်းရှိပါတယ်။နောင်တစ်ချိန် ဒါလေးတွေက အမှတ်တရကျန်နေမှာမို့ ဒီနေရာလေးမှာ လာပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။ လာလည်ရင်းနဲ့ အညာသားလက်ရာတို့ဟူးသုပ်လေး အားပေးသွားကြအုံးဗျာ။လာလည်ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စာရေးသူ ရွှေညာသား at Thursday, October 17, 20190comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မြန်မာဖောင့် အပြောင်းအလဲလုပ်ပြီးနောက် ဘလော့ခ်ထဲရောက်လာတာ စိတ်တွေညစ်ပြီး ဘာမှလုပ်ချင်စိတ်
မရှိတော့သလိုခံစားလိုက်ရတယ်။မုန်တိုင်းအဝှေ့ခံထားရသလို ပြောင်းပြန်တွေဖြစ်နေတဲ့စာလုံးတွေကိုကြည့်ပြီးဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းမသိပါဘူး။ဇော်ဂျီနဲ့ရေးလာသမျှပို့စ်လေးတွေအားလုံးကပြောင်းကပြန်တွေဖြစ်ကုန်တာဆိုတော့ပြန်ရေးဖို့ကလည်းခံစားချက်အသစ်ထပ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။မူရင်းအတိုင်းဖောင့်တွေမှန်အောင်ပြန်ပြောင်းဖို့ဆိုတာလည်းအချိန်တော်တော်လေးပေးရမယ်ဆိုတော့ အပြောင်းအလဲကိုပဲလိုက်ပြီးနေသားကျအောင်ကြိုးစားရင်းဘလော့ခ်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်လာပြီးတတ်နိုင်သလောက်ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။အခုတော့ ယူနီကုဒ်လက်ကွက်လည်းအဆင်ပြေပြေရိုက်တတ်သွားပြီမို့စာရေးဖို့အားတက်လာပါပြီ။
ယူနီကုဒ်နဲ့ဆိုတော့ တင်ပြီးတဲ့ပို့စ်အဟောင်းလေးတွေကိုတော့ တတ်နိုင်သလောက် ပြန်မကြည့်မိအောင်နေဖို့ပဲကြိုးစားရတော့မယ်။
အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေ ညီအစ်ကိုမောင်နှမအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာ။
သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၂) ရက်
၁၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉
စာရေးသူ ရွှေညာသား at Tuesday, October 15, 20190comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook